I-Seaview Nest - I-Airbnb
Agios Markos, Corfu, i-Greece
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Konnect
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Konnect izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Siyakwamukela ku-The Sreon 's Seaview Nest, e-Agios Markos, idolobhana elincane lendabuko maphakathi nesiqhingi sase-Corfu. Itholakala endaweni enokuthula, leli khaya lamaholide lithembisa ukufeza lokho okulindele ngamaholide avuselelayo. Shiya ukuphila kwansuku zonke futhi uphumule ngaphansi kwelanga le-Corfiot, ujabulele ukubuka okumangalisayo kolwandle lwase-Ionian. Emizuzwini embalwa nje ukusuka, uzothola i-Ipsos, indawo engasolwandle enezindawo zokudlela, amathilomu, ama-bar nezimakethe ezincane. Ibhodlela lamahhala lewayini e-Miltos Taverna.
I-Seaview Nest iyindlu esanda kulungiswa, ehlanganisa isitayela sesimanje nemininingwane yendabuko. Iqukethe ikamelo elilodwa elinombhede olala abantu ababili, obheke uLwandle olumangalisayo lwase-Ionian. Ihlalisa izivakashi ezimbili.
Ukungena endlini, uzohlangana nekhishi elinakho konke elinakho konke okudingekayo ukulungiselela izitsha zakho ezenziwe ekhaya. Kukhona netafula lokudlela, lapho ungajabulela khona isidlo sakho sasekuseni nokudla kwakho.
Indawo yangaphandle iyindawo ekahle kakhulu yokujabulela indawo eluhlaza okotshani, ukuzola kwemvelo nobuhle bolwandle lwase-Ionian.
Indlu inendlu yokugezela eneshawa.
Umnikazi wendlu uzonikeza izivakashi zakhe ibhodlela lamahhala lewayini e-taverna yakhe ebizwa ngokuthi yi-Miltos, etholakala e-Ipsos.
U-A/C ne-Wi-Fi kuhlinzekwa mahhala ezivakashini zethu.
Inombolo yepholisi: 00000977369
Hlola ezinye izinketho ezise- Agios Markos, Corfu namaphethelo